नेकपा एकता, टुंगियो जिल्ला नेतृत्व – Samridda
Home > राजनीति > नेकपा एकता, टुंगियो जिल्ला नेतृत्व
नेकपा एकता, टुंगियो जिल्ला नेतृत्व
- April 23, 2019 0346
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकता भएको ११ महिनापछि जिल्ला नेतृत्व टुंगो लगाएको छ ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७०औं वार्षिकोत्सव तथा लेलिन जयन्तीका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमबीच ७७ वटै जिल्लाको अध्यक्ष र सचिवको नामावली घोषणा गरिएको छ । ७७ वटै जिल्लामध्ये तत्कालीन एमालेतर्फबाट ४४ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ३३ जिल्लामा अध्यक्ष पाएका छन् । एमालेको अध्यक्ष भएको जिल्लामा माओवादी केन्द्रको सचिव र माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भएको ठाउँमा एमालेको सचिव रहेका छन् ।
तत्कालीन एमालेबाट प्रदेश १ मा नौ अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पाँच अध्यक्ष पाएका छन् । प्रदेश २ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले चार÷चार अध्यक्ष भएका छन् । प्रदेश ३ मा एमालेले नौ र माओवादीले पाँच जिल्ला अध्यक्ष पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा एमालेले सात र माओवादीले चार अध्यक्ष पाएका छन् ।यसैगरी, प्रदेश ५ मा एमालेले सात र माओवादीले पाँच अध्यक्ष पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा एमालेले चार र माओवादीले ६ जिल्ला अध्यक्ष पाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले पाँच र माओवादी केन्द्रले चार जिल्लाको नेतृत्व पाएको छ ।
नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सहमतिपश्चात् आइतबार बसेको सचिवालय कमिटी बैठकले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई समेत पार्टी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिवको जिम्मेवारी दिइने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार जनप्रतिनिधि भएका नेता पनि जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव भएका छन् ।
जिल्ला नेतृत्वको घोषणा गर्दा नौ जना केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला कमिटी सचिव बनाइएको छ । शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई निरन्तरता दिने क्रममा अध्यक्ष नपाएको जिल्लामा सचिवमा स्वतः घटुवा हुनुपरेको हो । तर, तत्कालीन माओवादीतर्फका आठ जना पूर्वएमालेका एक जना केन्द्रीय सदस्य जिल्ला सचिवमा घटुवा भएका छन् । तर, उनीहरूको केन्द्रीय सदस्य पद कायम नै रहेको छ ।
उनीहरू आफूभन्दा जुनियर नेताको मातहतमा काम नगर्ने र पछि सो पदमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको निर्णयअनुसार हुने बताइएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार केन्द्रीय सदस्यको मातहतमा सचिव हुने मोरङका गोपी अछामी परेका छन् । मोरङमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका र हाल केन्द्रीय सदस्य बढुवा भएका विनोद ढकाल अध्यक्ष बनेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यबाट सचिवमा घटुवा हुनेहरूमा डाचाराज वाग्ले (सर्लाही), युवराज भट्टराई (रौतहट), दावा तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), श्रवण यादव (धनुषा), हिमाल शर्मा (काठमाडौं), शालिकराम जमरकट्टेल (धादिङ), दधिराम न्यौपाने (रूपन्देही) र प्रमोदनारायण यादव (सिरहा) रहेका छन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट जिल्ला अध्यक्ष बनाइएका धेरै नेता केन्द्रीय कमिटी सदस्य भए पनि पूर्वएमालेबाट जिल्ला अध्यक्ष बन्नेमा विनोद ढकाल र कृष्ण राई मात्र केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनीहरू तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष भएकाले शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार निरन्तता पाएका हुन् ।
७७ वटा जिल्लाका अध्यक्षमध्ये जम्मा तीन जना मात्र महिला छन् । मकवानपुरकी मनु सिग्देल, काभ्रेपलाञ्चोककी रूकु चौलागार्इं र लमजुङकी मधुमाया अधिकारी महिला जिल्ला अध्यक्ष बन्न सफल भए । त्यस्तै, ७७ वटा जिल्ला सचिवमध्ये केवल दुई जना मात्र महिला सचिवमा चयन भएका छन् । इलामकी सोममाया राई र नवलपरासी (पश्चिम)की तुल्सी पासी सचिवमा छनोट भएका दुई महिला हुन् ।
जातीय हिसाबमा पनि नेकपामा ब्राह्मण–क्षत्रीकै दबदबा छ । अध्यक्षतर्फ ५० र सचिवतर्फ ४३ जना ब्राह्मण–क्षत्री समुदायबाट छनोट भएका छन् । मधेसी समुदायबाट भने अध्यक्षमा ६ जना र सचिवमा चार जना मात्र चयन भएका छन् ।
दलित, गुरूङ, थारू र थकाली समुदायबाट अध्यक्षमा एक÷एक जना मात्रै चयन भएका छन् । सचिवतर्फ भने दलितबाट पाँच जना चयन भएका छन् ।
जिल्ला कमिटीमा विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार सदस्य रहने सचिवालय कमिटीले स्वीकृत गरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटीमा सदस्य रहेका नेता एकीकृत जिल्ला कमिटीमा स्वतः परेका छन् ।
कमिटीमा सदस्य संख्या थप्न मिल्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले वरिष्ठ र सक्षम नेतामध्येबाट थप्न सकिने नेकपाले जनाएको छ । जिल्ला कमिटीको सदस्य संख्याको अनुपात अनुरूप हुनेगरी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले वरिष्ठता र क्षमताका आधारमा आफ्नो तहको सचिवालय र कार्यालय गठन गर्न सक्ने स्वीकृत सचिवालयले दिएको छ ।
३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भएको थियो । पार्टी एकता भएको ११ महिनापछि जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाएको छ । यसअघि नै सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटीको घोषणा भइसकेको छ । जिल्ला तहको एकता टुंगो लागे पनि पोलिटब्युरो कमिटी, केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, जनवर्गीय संगठन, स्थानीय तहको एकता अझै टुंगो लागेको छैन ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले एकता प्रक्रियामा विलम्ब भए तापनि सर्वसम्मतिका साथ पदाधिकारीसहित जिल्ला कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । अब एकताका बाँकी काम पनि अविलम्ब सम्पन्न गरिने उनले जनाएका छन् ।
सिंगो पार्टीपंक्ति र आमजनसमुदायलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा परिचालित गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताउँदै उनले पार्टीको नियमित कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्दै विशेष अभियानका लागि तयारी हालतमा रहन पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यलाई आह्वान गरेका छन् ।
नेकपाको एकतामा देशै खुसी हुनुपर्दछ : ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकतामा देश नै खुसी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७०औं वार्षिकोत्सव तथा लेलिन जयन्तीका अवसरमा जिल्ला कमिटीको एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको सुदृढ बहुमतसहितको सरकार बनेको दुईवटा ठूला वाम पार्टी एक भएको सन्दर्भमा देशले नै खुसी मनाउनुपर्ने बताए ।
‘हाम्रो एकतामा कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र होइन, देशले नै खुसी मनाउनु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘किनभने यो स्थिरताको सुरुवात हो । देश अघि बढाउने कार्ययोजनाको एकता हो ।’कुनै बेला कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गीत ‘हामी जित्नेछौं एक दिन’ खुब गाउने गरेको प्रसंग निकाल्दै आज कम्युनिस्टहरूले जितेको दिन भएको उनले बताए ।
‘त्यति बेला हामी जित्नेछौं, एक दिन भन्ने गीत गाउथ्यौं तर आज हामीले जितेका छौ,ं’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म स्वार्थको राजनीति भएर कम्युनिस्टहरूले जित्न सकेनन् । जब आफ्नो स्वार्थ गौण र देशको स्वार्थलाई प्रधान मान्ने नेतृत्व आयो तब कम्युनिस्टले जित्यो ।’प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका केही नेता अझै पनि राजतन्त्र ब्युताउँने सपना देखिरहेको बताए । विगतमा कांग्रेसका कारण प्राप्त उपलब्धि जोगाउन नसकिएको बताउँदै उनले उसको बानी सहयात्रीलाई अविश्वास गर्ने र विरोधीसँग मिल्ने भएको र अहिले पनि त्यो बानी नगएको बताए ।
एक वर्षमा महाधिवेशन : दाहाल
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने उद्घोष गरेका छन् । पार्टी एकता टुंगिएपछिको कार्यभार जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘आजबाट पार्टी एकता टुंग्याएर नयाँ अभियानमा जानुछ । अब हामीले आठ महिनाभित्र सबै जिल्ला अधिवेशन र एक वर्षभित्रमा महाधिवेशन सफल पार्नुपर्नेछ । त्यो समय महाविवाद र महाबहसको भट्टी हुनेछ । त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केही सन्देश दिनेछ । कम्युनिस्टहरूले ठीक ढंगले विश्लेषण, संश्लेषण गरियो भने समाजवादी यात्रा वैज्ञानिक समाजवादतर्फ जानेछ ।’
एउटा नयाँ सांस्कृतिक आन्दोलन चाहिएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ अभियान चलाउन जरुरी रहेको बताए । अहिले सांस्कृतिक क्रान्ति चलाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति चिनियाँ मोडलको नभई नेपाली सांस्कृतिक क्रान्ति चलाउनुपर्ने बताए । जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न पहल लिनुपर्ने बताउँदै उनले नेपाली श्रमजीवी जनता र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा कदम चाल्नैपर्ने बताए । ‘कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भयो भने निरंकुशता आउँछ भन्नेलगायतका भ्रम छर्ने काम भए,’ दाहालले भने, ‘पार्टी एकता रोक्न नेपालभित्र र नेपालबाहिर पनि प्रयत्न भए । हामी विचलित नभइकन अगाडि बढ्यौं । अन्ततः अघिल्लो वर्ष ३ जेठमा पार्टी एकता गरेरै छाड्यौं ।’
सानो मिहिनेत, विवेक र संकल्पले पार्टी एकता नभएको बताउँदै उनले पार्टी एकता प्रक्रियाको अन्तिम फलामे ढोका जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लगाएर पार गरिएको बताए । छिटो पार्टी एकता गर्नुप¥यो, पार्टी एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउनुप¥यो भनेर दिएको दबाबकै कारण एकता टुंगो लगाउन सम्भव भएको उनले बताए । व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थ हेरेको भए यो एकता सम्भव नहुने उनले बताए । समाज विकासको वैज्ञानिक नियमलाई आत्मसात गरेर परिवर्तन र गतिको अनन्त प्रवाहमा सामाजिक परिवर्तनलाई अगाडि बढाएर क्रान्ति र युगको नेतृत्व गर्न सकिने उनले बताए ।
‘महान् लेनिनको जन्मजयन्तीको सन्दर्भमा पार्टी स्थापना भएकाले आधारभूत सिद्धान्तको रक्षा गर्ने, त्यसलाई प्रयोगमा लैजाने र सफल पार्ने कामको दृष्टान्त लेनिनले प्रस्तुत गर्नुभयो,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हाम्रा अगाडि कामहरू अझ धेरै छन् । पछाडि फर्केर होइन, अगाडि बढेर, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सारलाई खिचेर समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्छ । यो आफैंमा एउटा युगान्तकारी काम हो । ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।’
नेकपा : अध्यक्ष–सचिव को कहाँ ?
ताप्लेजुङ– अध्यक्ष विजय बनेम, सचिव बलबहादुर साम्सोहाङ, पाँचथर– अध्यक्ष राजकुमार भण्डारी, सचिव होमप्रसाद जवेगु, ईलाम– अध्यक्ष राम राना, सचिव सोममाया राई, झापा– अध्यक्ष चिन्तन पाठक, सचिव मणिकुमार साङपाङ, मोरङ– अध्यक्ष विनोद ढकाल, सचिव गोपिबहादुर आछामी, सुनसरी– अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डल, सचिव रमेश बस्नेत, धनकुटा– अध्यक्ष राजेन्द्र राई, सचिव ऋषिराम ढुङ्गाना, तेह्रथुम– अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी, सचिव ईन्द्रबहादुर ईमसुङ, संखुवासभा– अध्यक्ष हेमराज घिमिरे, सचिव कृष्ण याख्खा, भोजपुर– अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, सचिव विमल खड्का, खोटाङ– अध्यक्ष देवान चामलिङ, सचिव बबि चामलिङ, सोलुखुम्बु– अध्यक्ष मानवीर राई, सचिव गोम्बु शेर्पा, ओखलढुङ्गा– अध्यक्ष मोहनबहादुर खड्का, सचिव मोहन श्रेष्ठ, उदयपुर– अध्यक्ष विनोद कटुवाल, सचिव ईश्वरमणी राउत
सप्तरी– अध्यक्ष अशोक मण्डल, सचिव गोविन्द न्यौपाने, सिराहा– अध्यक्ष रामकुमार यादव, सचिव प्रमोदनारायण यादव, धनुषा– अध्यक्ष राजकिशोर यादव, सचिव श्रवण यादव, महोत्तरी– अध्यक्ष राजु खड्का, सचिव सौकिलाल यादव, सर्लाही– अध्यक्ष रेवती पन्त, सचिव डाचाराज वाग्ले, रौतहट– अध्यक्ष कमल यादव, सचिव युवराज भट्टराई, बारा– अध्यक्ष छत्रबहादुर श्रेष्ठ, सचिव सुन्दर विश्वकर्मा, पर्सा– अध्यक्ष प्रभु हजारा, सचिव विजय महतो
चितवन– अध्यक्ष यमबहादुर परियार, सचिव कृष्णभक्त पोख्रेल, मकवानपुर– अध्यक्ष मुनु सिग्देल, सचिव प्रेम पुलामी, धादिङ– अध्यक्ष भूमि त्रिपाठी, सचिव शालिकराम जम्कट्टेल, नुवाकोट– अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडा, सचिव नारायण खतिवडा, रसुवा– अध्यक्ष कन्र्याल तामाङ, सचिव ईन्द्र गोतामे, सिन्धुपाल्चोक– अध्यक्ष झम्क नेपाल, सचिव दावा तामाङ, दोलखा– अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोख्रेल, सचिव गोपाल पाण्डे, रामेछाप– अध्यक्ष मदनकुमार तामाङ, सचिव शान्तिप्रसाद पौडेल, सिन्धुली– अध्यक्ष राजन दाहाल, सचिव प्रदीप कटवाल, काभ्रेपालञ्चोक– अध्यक्ष रुकु चौलागाई, सचिव टोकबहादुर वाईवा, भक्तपुर– अध्यक्ष बचनबहादुर देउजा, सचिव डी.पी. ढकाल, ललितपुर– अध्यक्ष हरिकृष्ण व्यञ्जनकार, सचिव राजकाजी महर्जन, काठमाडौं– अध्यक्ष कृष्ण राई, सचिव हिमाल शर्मा
कास्की– अध्यक्ष कृष्ण थापा, सचिव बखानसिंह तमु, तनहुँ– अध्यक्ष केदार सिग्देल, सचिव राजेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लमजुङ– अध्यक्ष मधु अधिकारी, सचिव धनञ्जय दवाडी, गोरखा– अध्यक्ष लेखबहादुर थापा, सचिव प्रेम गुरुङ, म्याग्दी– अध्यक्ष गोविन्द पौडेल, सचिव हरिकृष्ण श्रेष्ठ, मुस्ताङ– अध्यक्ष चन्द्रमोहन गौचन, सचिव सत्यनारायण शेरचन, मनाङ– अध्यक्ष पाल्तेन छोयान गुरुङ, सचिव बेदबहादुर गुरुङ, बाग्लुङ– अध्यक्ष ईन्द्रलाल सापकोटा, सचिव ज्ञामनाथ गैरे, पर्वत– अध्यक्ष पदम गिरी, सचिव सुदीप कुँवर, स्याङ्जा– अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरे, सचिव मीनबहादुर गुरुङ, नवलपरासी (पूर्व)– अध्यक्ष रोशन गाहा, सचिव मित्रशरण शर्मा
रोल्पा– अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्ती, सचिव हरिप्रसाद घर्ती, रुकुम (पूर्व)– अध्यक्ष मेघबहादुर श्रेष्ठ, सचिव सतमान पुन, प्यूठान– अध्यक्ष तुलसीराम शर्मा, सचिव नारायण अधिकारी– अर्घाखाँची, अध्यक्ष चेतनारायण आचार्य, सचिव ठाकुर वि.क., गुल्मी– अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त, सचिव वीरबहादुर कार्की, पाल्पा– अध्यक्ष नारायण आचार्य, सचिव गिरबहादुर थापा, नवलपरासी (पश्चिम)– अध्यक्ष भविश्वर तिवारी, सचिव तुलसी पासी, रुपन्देही– अध्यक्ष शिवराज सुवेदी, सचिव दधिराम न्यौपाने, कपिलवस्तु– अध्यक्ष झविलाल पोख्रेल, सचिव रामचन्द्र शाह, दाङ– अध्यक्ष टिकाराम खड्का, सचिव तुलसीराम पुन, बाँके– अध्यक्ष आई.पी. खरेल, सचिव अशोक कोइराला, बर्दिया– अध्यक्ष भवनकुमार थारु, सचिव हरि ज्ञवाली
सुर्खेत– अध्यक्ष धु्रव शाही, सचिव कृष्णबहादुर जिसी, दैलेख– अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा, सचिव प्रेम कटुवाल, जाजरकोट– अध्यक्ष ढकवीर राना, सचिव करवीर शाही, रुकुम (पश्चिम)– अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सचिव विमल पुन, सल्यान– अध्यक्ष गोविन्द पुन, सचिव कर्णबहादुर बुढा, जुम्ला– अध्यक्ष बीरबहादुर कुँवर, सचिव तिर्थबहादुर बुढा, कालिकोट– अध्यक्ष धनजीत शाही, सचिव नागिन्द्र शाही, हुम्ला– अध्यक्ष लालकेश जैसी, सचिव दल रावल, डोल्पा– अध्यक्ष दत्तबहादुर रोकाया, सचिव मालबहादुर रोकाया, मुगु– अध्यक्ष सुरवीर बुढा, सचिव धर्मबहादुर शाही
दार्चुला– अध्यक्ष गणेशसिंह खत्री, सचिव रामदत्त जोशी, बैतडी– अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल, सचिव प्रेम भट्ट, डडेल्धुरा– अध्यक्ष मानसिंह माल, सचिव तारा जोशी, बाजुरा– अध्यक्ष कालुबहादुर शाही, सचिव भरतबहादुर बुढा, बझाङ, अध्यक्ष मीनबहादुर कुँवर, सचिव दिलबहादुर सिंह, अछाम, अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवर, सचिव झपट साउँद, डोटी– अध्यक्ष चक्रबहादुर मल्ल, सचिव शैलेन्द्र वि.क., कैलाली– अध्यक्ष रतन थापा, सचिव लालबहादुर सोडारी, कञ्चनपुर, अध्यक्ष बीरबहादुर थापा, सचिव तारा लामा
Rajdhani Daily बाट
पानी बोक्दा बोक्दै सकिने भो जिन्दगि
November 10, 2017 0283
बोर्ड अध्यक्षको बोल्ड निर्णय, ‘कलंक’को बुधबार रिलिज रोकियो
April 17, 2019 April 17, 2019 0247
मलेसियामाथि नेपालको सहज जित
April 15, 2019 April 15, 2019 0234
बलात्कारिलाई कडा कार्वाहिको माग गर्दै काठमाण्डौँमा धर्ना
March 17, 2018 March 17, 2018 0835
बालुवाटारको जग्गामा राष्ट्रिय झण्डा गाड्न गएका विवेकशिल नेपाली दलका नेता कार्यकर्ता प्रहरीको नियन्त्रणमा
April 17, 2019 0266
February 24, 2020 0352
February 22, 2020 0220
February 9, 2020 0265